Iimbasa ezikhethekileyo zikaLedonne eziphefumlelwe yindalo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Asiyi kuyeka ukuphawula izindululo zobugcisa nezobugcisa eziphuma kancinci kwizinto eziqhelekileyo. Indlela ekhethekileyo yokuzihlukanisa nabanye kukuba nento enokukuchaza. Nangona namhlanje oku kunzima ngenxa yenkululeko enikwa yi-Intanethi ukuze ukwazi ukwazi iindlela ezintsha ukuba umntu uyazi apho ajonge khona.
Into eyahlukileyo neyahlukileyo inokuba yimbasa apho kufihlwe umzekeliso omncinci ochaza inxenye yobuntu bethu okanye isimilo sethu. Kananjalo ezo medallions zinokubamba lolo thando kwindalo iphela kunye neenkwenkwezi njengoko zisenzeka kunye nezo zidalwe ngu Khara Ledonne, umyili wezacholo ovela eNew York owenza olu hlobo lwezinto ngokupheleleyo ngesandla.
Uyilo lwezandla zakhe zifihla amaqela eenkwenkwezi kwaye ziqulathe ezo ndawo zendalo yonke onokucinga ngazo Ngobusuku apho inyanga inyamalale kwaye omnye uphumile kolo ngcoliseko kwindawo ekhethekileyo. Ngendlela apho bambalwa kwaye bambalwa kwaye abo kufuneka baqhube ixesha elide ukuphuma kwezo zixeko ke "on".
I-Ledonne i-oxidizes iimallion ngoko ke ujongo lwe rustic ngaphambi kokuhombisa nganye ngepeyinti ekhethekileyo yeoyile. Akukho nasinye seziqwenga asithengisayo esivela e-Etsy ezifanayo kwaye uluhlu lweendlela zakhe zoyilo lusuka kwinto ekufutshane nomhlaba ukuya kwenye into ekude lee kwiinkwenkwezi esinokuzibona kubusuku obukhethekileyo.
Uneemallions zakhe kwiwebhusayithi yakhe kwi-Etsy, apho unokufumana khona imisebenzi yakhe emininzi. Imbasa ekhethekileyo ekulungeleyo ukufumana isipho okanye loo nto Ndiyakuthanda ukufunda ngeenkwenkwezi Kwaye ineenkwenkwezi okanye iplanethi njengeyona nto ibalulekileyo kubomi bayo obubalulekileyo.
Oku i-Etsy yakho kunye medallions zabo ezizodwa. Ukuba ujonga into efana nayo unayo oku kungena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iimbasa ezincinci ezifihla indalo ngaphakathi